Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Mere Untold Biography Eziokwu
LB na-ewetara ndi kuru akuko nke Nigeria Football Genius aha ya bu “Vic“. Anyị Victor Osimhen Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ebili nke Victor Osimhen. Ebe E Si Nweta Foto: Vanguard, NigerianNewsDirect na Twitter
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ọkpụkpọ kachasị amara nwere anya maka ịkwa mgbaru ọsọ mara mma. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Victor Osimhen nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Na-amalite, aha ya zuru ezu bụ Victor James Osimhen. A mụrụ Victor Osimhen dịka ọ na-akpọkarị na Xbọchị 29 nke ọnwa Disemba 1998 na nne ya na nna ya nwụrụ, Elder Patrick Osimhen n’obodo Lagos, Nigeria. Ọ bụ onye ikpeazụ n'ime ụmụaka isii nne na nna ya mara mma nke e sere n'okpuru.
Victor Osimhen Ndi nne na nna- Nna ya- Okenye Partick & late Mama. Ebe E Si Nweta Foto: NigerianNewsDirect na IG
Ndị nne na nna Victor sitere na ezinụlọ ha sitere na South Nigeria kpọmkwem Esan South East Local Government Area nke Edo State na Nigeria. Ezinaụlọ ya na aha nna nke bụ “Osimhen"Pụtara 'Chukwu di nma'n’asụsụ ala Ishan.
Dị ka ọtụtụ ndị ama ama na South Nigeria, Victor Osimhen sitere na ezinaụlọ dara ogbenye. Tupu a mụọ ya, ndị mụrụ ya mere mkpebi ịkwaga n'obodo “LagosIsi obodo akụ na ụba Nigeria. Ọbụna mgbe ha nọ na Lagos, ezinụlọ ahụ nwere ihe isi ike, nke na-ata ahụhụ nke obere Victor, mgbe ahụ ọ bụ nwa na-amụ ije, chere ihu anwụ na-ere ọkụ na Lagos ebe nne na-ere mmiri sachet iji gbakwunye ego ọ na-enweta.
Victor Osimhen toro na nwanne ya nwoke Andrew na 4 ụmụnne ndị ọzọ nọ na Olusosun, a Obere obodo gbara gburugburu na Oregun, Ikeja, Lagos. Obodo a na-anabata otu n'ime akwa mmiri kachasị na Africa. N'etolite etolite etolite etolite, Victor Osimhen gbara mmiri ma werekwa mmiri ndi ozo n’ekwuputa uzo iji bulite ego maka mmuta ya na ndu ezi na ulo.TheNationOnlineng Akụkọ).
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Luslọ akwụkwọ praịmarị Olusosun nke ọ gara bụ ebe ọgbakọ egwuregwu na ụmụ akwụkwọ niile nọ n'obodo.
Primarylọ akwụkwọ praịmarị Olusosun- Ebe njem bọọlụ bidoro. Ebe E Si Nweta: LagosSchoolsOnline
N'uhuruchi ọ bụla, ọtụtụ ụmụ nwoke gụnyere Victor na-aga n'ọhịa egwuregwu ịgba egwu na-ekiri nwanne ya nwoke nke bụ onye egwu bọọlụ na mpaghara. Onye ọkpara n’ime ezinụlọ ha nke akpọrọ Andrew ahapụrụ agụm akwụkwọ ya iji nweta ego iji lekọta Victor na ụmụnne ya ndị ọzọ.
Na-enyere aka ịnya igwe, Victor mụtakwara ịkụ bọl n'ihi nwanne ya nwoke nke okenye, Andrew. Ọ nwekwara mmasị na Chelsea FC ka ọ na-ele ka otu egwuregwu na-egwu na ebe nlele. Ya na ndi ezi na ulo ya buru nnukwu ndi enyi na ndi otu Nigeria (Super Eagles). Nkwado nke otu ahụ na oke egwu ya maka igwu egwuregwu ahụ mepụtara ọchịchọ ịghọ ọkachamara.
N'ịhụ na nwanne ya nwoke nke ukwuu nwere ikike karịa, Andrew kwesịrị ịhapụ egwuregwu ahụ iji chee ihu azụmaahịa akwụkwọ akụkọ ya. Ọ tụfuru echiche nke ịga n'ihu na agụmakwụkwọ ya ka o wee nwee ike ịkpata ego iji nyere obere nwanne ya onye ọ chụgara ịbụ onye isi mmụọ.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ Ndụ Mmalite
Oge adịghị ewe tupu nrọ ezinụlọ amalite ịkwụ ụgwọ dị ka ndị na-ahụ maka egwuregwu bọl obodo hụrụ ihe pụrụ iche banyere Victor wee kpọọ ya ka ọ gaa Ulitmate Strikers Academy na Lagos ebe ọ nwere ule mbụ nke ịga nke ọma.
N'afọ 2014, arụmọrụ Victor Osimhen na Ultimate Strikers hụrụ ka coac nabatara yah Amuneke iji nọchite anya mba ya U-17 otu. Cheta na: Otu egwuregwu bọọlụ U-17 nke ala Nigeria akpọrọ Golden Eaglets, bụ ndị otu kachasị ọdụ nke na-anọchite anya mba Nigeria na football. Victor Osimhen nyere aka nyere ndị otu aka iru eru maka ndị a U-17 FIFA World Cup nke emere na Chile.
Egwuregwu 2015 FIFA U-17: Victor Osimhen nwere ezigbo mmalite na asọmpi ahụ dịka o mere nnukwu ihe mgbaru ọsọ abụọ na mpụta mbụ a, na-emeri ọtụtụ nde obi gụnyere ndị European scouts gburugburu okwu ahụ. Osimhen dị mkpa na mmeri U-17 nke Nigeria na FIFA World Cup na Chile. N’inye aka obodo ya ka ha merie asọmpi a, onye Naijirịa nwere onyinye mekwara ihe nrịgo onye mgbaru ọsọ kachasi elu mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ 10 na kwa FIFA U-17 World Cup Silver Ball.
Victor Osimhen nwere nke FIFA U-17 World Cup Golden Boot na Ball Ball. Ebe E Si Nweta: Jumia na Oge Hund
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Akpanwu akwukwo akuko
Emechara World Cup, ekpughere ya na nnukwu klọọkụ sitere na Europe, ndị dịka Arsenal, Man City, na Tottenham Hotspur nọ mgbe ọrụ ya gasịrị. N'ụzọ na-awụ akpata oyi n'ahụ, Victor Osimhen jụrụ onyinye niile n'ihi na klọb ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ nyere ya ego kasịnụ.
Obere oge ka akpọrọ ya 2015 African Youth Player of the Year na CAF Awards na Abuja na Jenụwarị 2016, Osimhen mara ọkwa ụwa na ọ ga-agbaso ọrụ aka ya na klọb German Bundesliga, Wolfsburg. Dị ka ya si kwuo, mmesi obi ike nke klọb ahụ na ego bụ ihe na-enye ezinụlọ ya nsogbu n'obi na ọ na-ahọrọ igwu klọb German ọ bụla na Europe.
Ahụhụ na Germany: Osimhen bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta afọ atọ na ọkara ruo June 2020 wee mepụta mpụta ya na njem elu nke German na May 2017. Naanị ọnwa anọ o mehiere Bundesliga ya, nsogbu malitere ịdọrọ onye Naịjirịa. Ihe mmerụaka ubu mere ka ọ banye n'ịwa ahụ nke mere njedebe oge ọmụmụ ya. Emecha ọkwa a dara ogbenye, Victor Osimhen (nke a na-ese foto n'okpuru) ghọrọ nnukwu akara site na ọgbakọ klọb.
Victor Osimhen na-ele anya na o nwere olile anya dịka ọ na-alụ ọgụ na mmerụ na ọrịa na Germany. Isi mmalite Twitter.
Osimhen abalị na-aga n'ihu mgbe ọ gbakere site na mmerụ ubu. N'oge a, ọ bụ ọrịa weghara, na-eme ka ọ ghara inwe oge ezumike na ihe mgbu kachasị, na-efu na nchịkọta ụwa nke 2018 nke ụwa. Ị maara?… Ọ nọ n'ụlọ ọgwụ n'oge Russia 2018 FIFA World Cup.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Na-ewu ewu Akụkọ
O were Osimhen ihe dị ka oge 2 na-egbu mgbu ka o si na nrọ ya pụta. Ihe mgbaghasị n'ihi mmerụ ahụ na ọrịa hụrụ ya ka ọ na-ele ihe mgbaru ọsọ efu (0) na Wolfsburg wee si otú a mebie ọrụ ya na usoro ahụ.
N'ịga n’ihu, Osimhen kpebisiri ike ịga soro ndị ntoroọbịa Zulte Waregem na Club Brugge, n’oge ahụ bụ ndị na-achị achị n’oge ikpe. EGO, Ahụike ya metụtara oke ala ka ọ dara ọrịa ịba nke metụtara ọnọdụ anụ ahụ ya ma mee ka klọb abụọ jụrụ ya.
Na 22 August 2018 bụ ụbọchị ahụ chi nke football meere ya ebere. Ọ bụ ụbọchị ụlọ ọgbakọ Belgium Charleroi nabatara ya na mgbazinye ego oge. Victor Osimhen mere oge ngosipụta ya zuru oke na 22 Septemba, na-ebute ihe mgbaru ọsọ mbụ ya dị ka ọkachamara na onye na azụ. Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Osimhen gwara Egwuregwu BBC na o nwere “wee chọta obi ụtọ ya ọzọ mgbe ogologo nchegharị dị otú ahụ gasịrị".
Victor Osimhen mechara nweta obi uto mgbe ogologo oge ichere dị otú a. Ebe e si nweta ya mgbaru ọsọ
Onye Nigeria nwere ndidi na-eme nke ọma na akụkụ ndị Belgium, na-egwu egwuregwu 36 ma na-egwu ihe mgbaru ọsọ 20, njirimara nke mere klọb ya, Charleroi, na-eme ka nhọrọ ha nweta ya mgbe ọ na-agbazinye ego. Mgbe ọ gbasasịrị bọọlụ na Belgium, ndị Nigeria chere na ọ bụ oge kwesịrị ekwesị iji gbagoro n'ụzọ ya dị ka onye ndu Africa na-eduga nke ọ na-emebu. Na July 2019, ọ mere njem dị elu na ọrụ ya site na ịbanye na Lille OSC.
Victor Osimhen Rise to Akụkọ Ama. Ebe E Si Nweta Foto: mgbaru ọsọ
Kama isiala na mmerụ ubu na ịba, onye egwuregwu Nigeria ahụ si na ike rue ike, na -agide oke meteoric wee bụrụ onye ama ama. EGO, otu n'ime akụrụngwa kachasị mma nke Africa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ama ama na Europe, o doro anya na ọtụtụ ndị fans ga-ajụ ajụjụ ma Victor Osimhen, dị ka n'oge edere, nwere enyi nwanyị.
Ọnye na-bụ Victor Osimhen Girlfriend? Ebe E Si Nweta Foto: IG
Enweghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na àgwà ọma nke Osimhen gụnyere ịkwa iko, iguzosi ike n'ihe, ịrụsi ọrụ ike na ịdị umeala agaghị eme ka ụmụ nwanyị kwenye na ọ ga-abụ ezigbo enyi.
Tupu ịbụ onye a ma ama, a na-ebo ebubo na Oshimen dere ụbọchị nwa agbọghọ mara mma nke na-akpọ aha Blessing. N'oge mmekọrịta ha, ndị hụrụ ha abụọ na-ekerịta foto ibe ha na Instagram na oge niile. Egosipụtara mmekọrịta nwoke na nwanyị Osimhen kwuru na enyi nwanyị ya ihe dị ka afọ 2 tupu o kpebie ihichapụ ọnọdụ ya na otu ụzọ nke mgbasa ozi mmekọrịta ya.
Nwanyị Victor Osimhen
Kemgbe mgbe ekpochapụrụ ozi ya na social media ya, asịrị na-adị, nke kwuru na Blessing abụghị enyi nwanyị Osimhen kama ọ bụ nwunye ya raara alụ. Nyochaa site na njikwa mgbasa ozi ya, enweghị ozi gbasara agbamakwụkwọ ọlụlụ ma ọ bụ lụrụ Ngọzi. Kaosinadị, ọ ka nwere ike ịlụ ya kama ọ chọrọ ka ọha mee ya ọha.
Dị ka n'oge edere, Osimhen dị ka onye na-alụbeghị di ma ọ bụ na ọ họrọla itinye uche na ọrụ ya kama ịchọ enyi nwanyị ma ọ bụ ime ka ọha na eze nwee mmekọrịta ya.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ nke Onye
Knowmara Victor Osimhen Ndụ onwe ya pụọ ​​na football ga - enyere gị aka ịmatakwu onye ọ bụ nke ọma. Bido, ọ bụ onye maara ihe ọ pụtara na nchekwa na nnọgidesi ike, ozi nke dị na foto profaịlụ nke Whatsapp ya oge niile.
"Enweghị m nsogbu ọ bụla site na ụfọdụ ihe na-adịghị mma na ngwongwo ndị e dere banyere m n'oge m na Wolfsburg,”. Ọzọkwa, site n'okwu ndị a nke ya, ị ga - enwe ike iwepu ngwa ngwa na ọ bụ ọgụ.
Ewezuga bọọlụ, Osimhen nwere mmasị ige egwu Contemporary R&B ebe ọkacha mmasị ya ka nwere “Ekwere na m nwere ike ịfe,, Egwuru egwu egwu dara R Kelly. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ abụ Kelly n'ụzọ nke ya n'oge a na-eme ememme ya. Na mpaghara egwu obodo Naijiria, Osimhen raara Olamide na egwu kachasị amasị ya site n’aka onye na-eme egwuregwu hip-hop nke Nigeria bụ ‘etie ke ebekpo ’.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ Ezinụlọ
Victor Osimhen, onye bụụrụ ezinụlọ ya na-a isụrị ọ isụ maka akabeghị ụzọ ezinụlọ ya maka nnwere onwe ego niile na-ekele football. Ndị otu ezi-na-ụlọ nile (dịka egosiri n’okpuru ebe a) ndị guzo ya n’akụkụ n’oge ọchịchịrị na-enwe obi ụtọ ugbu a n’uche zuru oke nke ndị football ọkachamara na-eweta.
Ndị ezinụlọ Victor Osimhen. Ebe e si nweta NigerianNewsDirect
Banyere Nna Victor Osimhen: Pa Patrick Osimhen bụ nanị nne na nna ndụ na nna nke Victor Osimhen. Ọ bụbu onye njikwa nwa ya nwoke ruo 2015 mgbe o nyefere ikike nke njikwa ya na onye nnọchi anya France bụ Oliver Noa nke Njikwa Egwuregwu Noga.
Nna nna Victor Osimhen (nke abụọ site n'aka nri), nwa ya nwoke na ndị otu egwuregwu egwuregwu Noga. Ebe e si nweta ya AllNigeriaSoccer
Mgbe Patrick Osimhen bụ onye na-ahụ maka nwa ya nwoke, ọ gbabara na ndị ọzọ na-anwa ịgbaghari ya iji nweta ego site na mbufe nke nwa ya nwoke na Wolfsburg. Ndi mmadu a ka ha na acho igha ya uzo, ka ha choo imekorita nwoke mbu ya, Andrew Osimhen karia mkparita uka banyere Victor Osimhen.
Banyere mama Victor Osimhen: Dabere na akụkọ, ọ na-egosi na nne Victor Osimhen anwụalala. Onye egwu Nigeria dị ka n’oge edere nne ya ugwu site n’inye ya foto dịka foto profaịlụ ya na akaụntụ instagram ya.
Nne Victor Osimhen. Ebe e si nweta Instagram
Victor Osimhnen Siblings: Victor nwere nwanne nwoke isii na ngụkọta yana Andrew Osimhen bụ onye a ma ama karịa nwanne ya niile. Victorhụnanya Victor Osimhen maka ụmụnne ya nwanyị enweghị oke. Ị maara?… N'otu oge, ọ nyefere nwanne ya nwanyị onyinye ọla edo ya nke Golden Boot ka ọ mụsịrị nwa nwanyị, naanị oge ọ meriri ihe nrite ahụ, na gburugburu November 2015.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - si ebi ndụ
Dị ka n'oge edere, uru ahịa ahịa ahịa Os Oshenhen Victor adaala elu karịa 13,00 mil. € dabere na Nyefee Ahịa. Dị ka a hụrụ site na aka ya na-elekọta mmadụ, ego a na-akwụ ụgwọ na-eme ka ọ bụrụ ụdị ndụ nwere ọmarịcha ụgbọ ala, ụlọ na mgbe ụfọdụ ụmụ agbọghọ nwere ike ịhụ ya.
Victor Osimhen na-ebi Ndụ dị mfe. Ebe e si nweta Instagram
N'ileghachi anya na azụlite ya siri ike na ezi na ụlọ ezinụlọ ya, o doro anya na Osimhen kwesịrị ịdabere na nke ọma ma mara etu esi ejikwa ego ya.
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Eziokwu efu
Esemokwu Ezinaụlọ: A tụbara ọdịnihu nke Victor Osimhen n'otu ọgba aghara mgbe ọgba aghara ezinụlọ banyere nnyefe ya. Ndị otu ezi na ụlọ ya na-emegide ibe ha onye kwesịrị ịnọchite onye ọkpụkpọ ahụ.
Dabere na akụkọ sitere na ntanetị, nwanne nna Osimhen, Michael, na-edu otu ndị ọrụ mgbe Andrew, okenye ya na otu nke ndị ọzọ. Otu abụọ a nwere ndị ọrụ ha na-alụ ọgụ maka mbufe ego na ezigbo ikike ịnọchite anya onye ọkpụkpọ ahụ. Nsogbu ezinụlọ a nwere ọnọdụ ọhụrụ mgbe akụkọ gbagoro ọzọ na mgbasa ozi na ndị ohi kụrụ nna Osimhen ahụ maka ọjụjụ ọ kwadoro ịkwado onye ọkpụkpọ ahụ na Wolfsburg. E mechara mee ya ka ọ ghara ụgha. O were otu oge tupu nsogbu ezinụlọ akwụsị.
Nigerianlọ ịgba egwu nke Naịjirịa Na-ahụ Maka Ugwu: Na Jenụwarị 1, 2017, a kpọfere Victor Osimhen maka $3,970,225 gaa German VfL Wolfsburg sitere na Ultimate Striker Academy, klọb mpaghara na Lagos.
Ị maara?… Ego mbufe mere ka ọ bụrụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị ọnụ ka e si n’aka ndị otu egwuregwu nọ n’Afrịka banye n’otu nnukwu ndị otu Europe. Gbakọọ ọnụego mgbanwe a dị ka n'oge edere, agụmakwụkwọ Ultimate Strikers nwetara ihe nchịkọta njeri $ 1.4 ijeri site na mbufe Victor Osimhen.
Ihe kpatara o ji tozuo oke na Belgium: Ọtụtụ ndị Naijiria na-ahọrọ ịmalite ọrụ Europe na ngalaba nke mbụ nke A. A. Njikọ a abụrụla Mak maka ndị egwuregwu Nigeria na afọ na otu nke nyere Victor Osimhen ihe ịga nke ọma ya na European football.
Ị maara?… Onye bụbu onye nkuzi Super Eagles onye bụbu Stephen Keshi bụ onye duuru ọpụpụ nke onyinye ndị Nigeria iji jupụta Belgium na ngwụsị 1980. Likesdị Daniel Amokachi, Victor Ikpeba, Sunday Oliseh na Alloy Agu niile malitere ọrụ ha na Belgium. Mara: ọ bụ na Belgium Celestine Babayaro meriri nturu ugo ya Ebony ጫማ maka onye kachasi n’egwuregwu Africa n’egwuregwu Belgian.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata Victor Osimhen gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Benjamin Pavard Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu